ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အဖျား
ဟဲ့...ဘာလဲဟ “ မောင်မျိုး အဖျား” တဲ့ လန့်သွားတာပဲ။
ဘာဖြစ်နေပြန်ပလဲ နေမကောင်းဘူးလား။။ ကျန်းမာရေး ဂုစိုက်ဟယ်။
ဟုတ်ပ ကိုမျိုးရေ.... အခုတလောနေမကောင်းကြတာတွေပဲ ကြားနေရတယ် နေမြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေလို့...
ဖျားမှာပေါ့.. FB မှာ !@@!^%#$(&%$><<":@$% နေတာကိုး...
ခန္ဓာကိုယ်နာဖျားနေတယ်ဆို ဆေးသောက် အာဟာရရှိတာလေးစား... ခဏနေ နေကောင်းသွားမှာပါ... စိတ်တွေနာဖျားနေတယ်ဆို ပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြော... ပြီးတော့ တတ်နိုင်ရင် တရားထိုင်... အဲဒါဆို နေကောင်းသွားမှာပါ
မောင်မျိုး အဖျား မြန်မြန် ပျောက်ပါစေ.. ကိုယ်လည်း အကြည်ဓါတ်၊ အပျော်ဓါတ်တွေ ဖျားနေတာပါပဲ ..
ကဗျာလေးက သဘာဝဆန်ဆန် ဖျားတယ်
ကဗျာလေးက ဌက်ဖျားမသိလို အချိန်မှန်မှန်ဖျားတယ်
ကဗျာလေးက ကဗျာရှင်နဲ့အတူ ဖျားတယ်
ကဗျာလေးက ကဗျာပီသစွာ ဖျားတယ်
ကဗျာလေးက သဘာဝဆန်ဆန် အချိန်မှန်မှန် တိတ်ဆိတ်ခြင်း ကဗျာရှင်နဲ့ အတူ ကဗျာ ပီသစွာ ဖျားတယ် . . . . .
မိုးရွာထဲ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ညနေပိုင်း သင်တန်း သွားတက်တယ် ထင်တယ်..၊ ဒါမှမဟုတ် တုပ်ကွေး ရာသီများလား...? တကယ် ဖျားနေတာ ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပါးပါး ဂရုစိုက်ပါ ညီရေ...။
သံယောဇဉ်တွေ ... အဲတာတွေအကုန်လုံး
အရင်းးတက်နေပေမယ့် အရင်းသောက်ဆေး သောက်ဖို့ကျနော် ရင်းတယ်။
အဖျားက မကောင်းဘူး။ အရင်းက ပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ဖျားတွေကို ရင်းပေးလိုက်တာ။
ဟဲ နောက်တာပါ မောင်မျိုး ... အဖျားအမြန်ပျောက်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အရင်းတော့ မပျောက်စေနဲ့ပေါ့ကွယ်း))
ဖတ်ရင်း ဖျားချင်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက် မောင်မျိုးရေ။
ဇာဂနာပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်နော်.. “နေကောင်းသွားမှာပါ” လို့....း))
မှတ်ချက်ပေးသူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါဗျာာ ကျနော်က နေကောင်းပါတယ် စိတ်ကူးပေါက်လို့ ကဗျာမဟုတ် ဘာမဟုတ်ရေးလိုက်တား) ကျနော် အပျင်းကြောတွေ တော်တော်ထူနေတယ် ဟဲဟဲ ။
တော်သေးတာ ပေါ့ ဘလော့တွေ မဖျားလို့။ မဟုတ်ရင် post တွေဖတ်ရတော့မှာဟုတ်ဘူး။ :P